ZTE waxay xaqiijineysaa imaanshaheeda MWC 2020 in kasta oo uu jiro Coronavirus | Androidsis
ZTE waxay xaqiijisay imaanshaheeda carwada Mobile World Congress 2020 Barcelona. Waxay sidaas samaysaa in kasta oo ay jirto xiisad caafimaad oo daran oo sii daayaysa Coronavirus -ka Wuhan, laakiin taasi ma ahan mid walaac weyn leh maxaa yeelay waxay qaadaysaa tillaabooyin amni marka la tegayo dhacdo ay ka soo qeyb geli doonaan in ka badan 100.000 oo qof.
La Shirkadda ugu horreysa ee joojisa ka -qaybgalkeeda waa LG, Kuuriya soo saaray bayaan subaxnimadii oo dhan sidaasna ku wargelisay shirkadaha kale ee Aasiya inay ka qaybgalaan. Midka Shenzhen wuxuu rabaa inuu joogo shirweynaha maadaama ay hayaan warar badan oo ay soo bandhigaan.
1 Jooji shirka jaraa’id
2 5G wuxuu noqon doonaa mid muhiimad weyn leh
3 Waxay waxsoosaarka u keenaan dal kale
Jooji shirka jaraa’id
Shirka jaraa'id ee 25 -ka Febraayo waxaa baajiyay ZTE, laakiin maahan sababtaas ka -qaybgalka isagoo leh moodallo badan oo taleefanno ah oo la samayn doono oo imaan doona bilaha soo socda. Mid ka mid ah kuwa aadka loo sugayo ayaa ah Axon Pro 10 5G, oo ah taleefan aan hore u ogaanay faahfaahinta ku saabsan.
5G wuxuu noqon doonaa mid muhiimad weyn leh
ZTE waxay rabtaa inay muujiso guulaha ay ka gaartay hal -abuurka 5G, Xalalka 5G oo dhammaystiran ee ku -dhaqanka shabakadaha 5G iyo sidoo kale sahaminta shirkadda 5G. Shirkaddu waxay ku taallaa istaagga 3F30 ee Mobile World Congress ee Barcelona hoolka 3 ee Fira Gran Vía.
ZTE waxay saxiixday wadar ahaan 35 qandaraasyo ganacsi 5G ah suuqyada waaweyn oo ay ku jiraan Yurub, Aasiya Pacific, Bariga Dhexe iyo Afrika. Tan, waxaa jira ballanqaad weyn oo R&D ah, kaas oo ay dadyowga kala duwan u qoondeeyaan 10% dakhligiisa sannadlaha ah.
Waxay waxsoosaarka u keenaan dal kale
Waxaa jira shirkado badan oo u gudbiyay dalal kale soo saarista aaladaha mobilada ee soo socda, wax caadi ah iyagoo og cudurka faafa ee weyn ee uu Shiinaha hadda la kulmayo. Sidoo kale waa kiiska ZTE, oo warshado ku leh Singapore, mid ka mid ah goobihii loo doortay inay sii wataan silsiladda wax -soo -saarka ee qalabkooda xiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » ZTE wuxuu xaqiijinayaa kaqeyb galkiisa MWC 2020 inkasta oo Coronavirus
MergeCrafter ama sababta ay Microsoft u iibsan laheyd munaasibaddan niikada ee ku saleysan Minecraft